नवराज कुँवर काठमाडाैं, १७ जेठ
विश्व राजनीतिकै रुपरेखा बदलिदिएको रुसी क्रान्तिका नायक थिए भ्लादिमीर लेनिन् । रुसमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरेका लेनिनले सन् १९१७ मा रुसी क्रान्तिको सिर उठाइदिएका थिए । जब रुसमा क्रान्ति सफल भयो, त्यसपछि उनी क्रान्तिकारी, राजनीतिज्ञ मात्र रहेनन्, विश्वमै प्रभाव छोड्न सफल समाज र दर्शनशास्त्रीका रूपमा स्थापित बने । नेपालमा समेत यहाँको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपाले लेनिनवाद अंगिकार गरेको पाइन्छ । आजको फरक पाटोमा क्रान्तिका प्रतीक मानिने स्व. लेनिनको प्रेम कहानी जो धेरैका लागि चाखलाग्दो हुन सक्छ, प्रस्तुत गरेका छौँ । लेनिनको यो कथाको स्रोत उनको सबैभन्दा नजिककी साथी अलेक्जेन्डर कोलन्ताइको पुस्तक ‘अ ग्रेट लभ’लाई मानिएको छ ।
सन् १९२३ मा लेनिनको प्रेम त्रिकोणमा एक किताब प्रकाशित भयो, ‘अ ग्रेट लभ’ ।
किताब लेनिनका नजिककी सहयोगी अलेक्जेन्डर कोलन्ताइले लेखेकी थिइन् । यो किताबले तत्कालीन सोभियत संघमा तहल्का पिटेको थियो ।
किताव लेनिनको प्रेमको कथामा आधारित थियो । किताबमा मालिकनी भनिने इनेसा अर्मांलाई लेनिनकी प्रेमिकाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । पछि यसका बारे अरु पनि किताब आए ।
रुसी क्रान्तिका नायक थिए, भ्लादिमीर लेनिन । उनी सन् १८७० मा सिन्विस्र्क भन्ने ठाउँमा एक कुलिन परिवारमा जन्मिएका थिए । लेनिन १९१७ देखि १९२४ सम्म सोभियत रुस र १९२२ देखि १९२४ सम्म सोभियत संघको पनि ‘हेड अफ गभर्नमेन्ट’ भएका थिए । उनको जीवन कहानी बडो विचित्रको छ ।
लेनिनले आफ्नो जीवनमा दुई महिलासँग प्रेम गरे । एक उनकी पत्नी बनिन् भने अर्की (क्राउन लाइफ पार्टनर) जीवनपर्यन्त साथी । यी तिनबीच अजिब खालको सम्बन्ध थियो ।
सबैभन्दा पहिला उनकी पत्नीको कुरा गरौँ । उनको नाम थियो, नादेज्दा क्रुप्साकाया । मिस्ट्रेस (मालिकनी)को नामले चिनिने इनेसा अर्मां जो फ्रेन्च–रुसी कम्युनिस्ट थिइन् । यी दुई महिलामा निकै प्रतिद्वन्द्विता थियो । यसका बाबजुत यो सम्बन्धलाई यी तिन जनाले रमाइलोसँग निभाए । उनीहरूबीचको सम्बन्ध वास्तवमै अस्वाभाविक थियो तर उनीहरू एक परिवार भएर बसेका थिए ।
१२ अक्टुबर १९२० मा उनकी अभिन्न साथी, प्रेमिका, संगिनी, मिस्ट्रेस अर्मांको निधन भयो । लेनिनका निकटस्थहरूले भनेका थिए, ‘यसपछि लेनिन धेरै नै विचलित भएका थिए ।’
सोभियत साइट रसियन बियान्डले यसबारे एक विस्तृत आर्टिकलमा तत्कालीन क्रान्तिकारी तथा लेनिनकी सहयोगी अलेक्जेन्डर कोलान्ताइलाई उद्धृद गर्दै लेखेको छ– शवयात्रामा लेनिन हामीसँग हिँडिरहेका थिए । उनले आफ्नो आँखा बन्द गरेका थिए । उनलाई सम्हाल्नु परेको थियो ।
पछि कोलन्तइले यसमा एक किताब पनि लेखिन्, जसको नाम थियो ‘अ ग्रेट लभ’ । यसमा लेनिन जीवनको प्रेम त्रिकोणबारे सविस्तार वर्णन गरिएको छ ।
जब प्रेमिकाको निधन भयो..
निधनभन्दा पहिले अर्मां कैयौँ हप्ता बिमार भइन् । पछि अचानक उनले संसार त्यागिन् । जुन ठाउँमा उनको असामयिक निधन भएको थियो, त्यो ठाउँ मस्कोभन्दा ८ सय ५० माइल टाढा थियो । अर्मांको मृत्युको खबर पाएलगत्तै लेनिन निर्निमेष बने ।
इनेसा अर्मांंसँग लेनिनकाे भेट निर्वासनका क्रममा भएकाे थियाे । यद्यपि, त्यति बेलासम्म लेनिनकाे बिहे भएकाे ११ वर्ष भइसकेकाे थियाे
इनेस अर्मांकी आमा अंग्रेज र पिता फ्रेन्च थिए । उनका पिता रंगकर्मी थिए र थिएटरका लागि रुस गएर बसेका थिए ।
अर्मांको विवाह एक सम्पन्न परिवारमा भएको थियो । उनको पतिको नाम अलेक्जेन्डर थियो । उनका ५ बच्चा भए । पछि उनले देवरसँग प्रेम गरिन् । आफ्ना बच्चा लिएर देवरसँगै बस्न थालिन् । तैपनि, पतिले आर्थिक सहयोग भने गरिनै राखे ।
यसका बाबजुद विस्तारै उनी राजनीतिमा सक्रिय भइन् । जब उनलाई निर्वासित गरियो, त्यसपछि उनी लेनिनको सम्पर्कमा आएकी थिइन् । प्रहरी र अरु मान्छे पनि उनलाई लेनिनकी मालिकनी ठान्थे । उनी लेनिनसँग धेरै नजिक थिइन् । यो कुरा क्रुप्सकायालाई थाहा थियो । उनी स्वयम् पनि अर्मांलाई खुब मन पराउँथिन् ।
लेनिनकी श्रीमती क्रुप्सकायालाई लेनिन र अर्मांबीचकाे सम्बन्धका बारेमा थाहा थियाे । तर, उनले याे सम्बन्धलाई स्वीकार गरिन् । कतियले भन्छन्, उनी स्वयं अर्मांलाई खुब मन पराउँथिन् ।
‘अ ग्रेट लभ’ मा लेखिएको छ, एकपटक लेनिनकी पत्नीले जानाजान अर्मां र लेनिनलाई करिब एक हप्तासम्म सँगै बस्न दिइन् । इनेसा अर्मांको जीवनी लेख्ने जन क्रेभिलका अनुसार उनमा बुद्धिमता र असाधारण सौन्दर्य थियो । साथै ऊर्जा, नारी सुलभ गूणका साथै व्यवहार, बुद्धि र क्रान्तिकारी आवेगको अदभुत समन्वय थियो । यस्तो सशक्त सम्मोहनको सामु को बच्न सक्थ्यो !
किताब अ ग्रेट लव मा लेखिएकाे छ- इनेसा अर्मांकाे निधन भएपछि लेनिन अन्तिम समयमा अन्तिम संस्कारमा पुगे । उनले अाफ्नाे अनुहार लुकाएका थिए ताकि, उनी दुःखी भएका कुरा कसैले थाहा पाउन नसकाेस्
कालान्तरमा लेनिन र अर्मांबीच भेटघाट पातलिँदै गयो । इनेसा बिरामी भएपछि उनलाई उपचारका लागि क्रिमिया पठाउने व्यवस्था लेनिनले नै गरिदिएका थिए । उनको अन्तिम संस्कारका बेला लेनिन अघोषित रूपमा पुगेका थिए । ‘अ ग्रेट लभ’की लेखिका कोन्तालइका अनुसार लेनिनले अनुहार छोपेका थिए ताकि कसैले उनलाई दुःखी देख्न नसकोस् ।
बुढेसकालमा पत्नी क्रुप्सकायासँग लेनिन ।
अर्मां र लेनिनको पहिलो भेट सन् १९०९ मा भएको थियो । यसपछि उनीहरूलाई पेरिसमा एक साथ बस्ने र काम गर्ने मौका मिल्यो । जसले उनीहरूको बारेमा थाहा पाएका थिए, उनीहरू भन्थे– अर्मां र लेनिनको सम्बन्ध साथीभन्दा धेरै माथि छ ।
लेनिन अर्मांप्रति पागल थिए । अर्मां पनि लगातार लेनिनलाई चिट्ठी लेख्ने गर्थिन्, जसमा उनले लेनिनप्रति आफ्नो प्रेम अभिव्यक्त गरेकी हुन्थिन् ।
लेनिन पत्नीको भूमिका
अर्मांसँग भेट हुनुभन्दा ११ वर्ष अघि नै लेनिनको विवाह नेदज्दा क्रुप्सकायासँग भएको थियो । नेदज्दा पत्नी र समर्पित क्रान्तिकारी मात्र थिइनन्, लेनिनकी सबैभन्दा विश्वासपात्र सहयोगी पनि थिइन् । अक्सर उनी लेनिनको जिन्दगीमा अर्मां आएकोप्रति निराश भने थिइन् । तर, पछि यी २ महिलाले आफूबीचको सम्बन्ध एक असल साथीका रूपमा विकास गरे ।
लेनिनले रुसी कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरेका थिए । १९१७ मा उनको नेतृत्वमा रुसी क्रान्तिले सिर उठायो । यसकारण १९२२ मा सोभियत संघको स्थापना भयो । समाज र दर्शनशास्त्रलाई लिएर लेनिनको मार्क्सवादी विचारले रुस मात्र होइन, संसारलाई नै प्रभावित गर्‍यो । उनको यो विचारधारालाई लेनिनवादको नामले चिनिन्छ ।
१९२४ मा लेनिनको निधन
लामो बिमारपछि २१ जनवरी १९२४ मा हृदयघातका कारण लेनिनको निधन भयो । त्यो बेला उनको सम्मानमा रुसको पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र सेन्ट पीटर्सवर्गको नाम परिवर्तन गरी लेनिनग्राद गरियो । यद्यपि, धेरै मानिस कम्युनिस्टको नाममा शहरको नामाकरण गरिएकोप्रति सन्तुष्ट थिएनन् । त्यसैले १९९१ मा यसलाई फेरि सेन्ट पीटर्सबर्ग बनाइयो ।
जब किताब प्रकाशित भयो
लेनिनको मृत्यु हुनुअघि १९२३ मा लेखिका अलेक्जेन्डर कोलन्ताइले लेनिनको त्रिकोण प्रेममा आधारित किताब नर्वेमा प्रकाशन गरेकी थिइन् । अलेक्जेन्डर कोलन्ताइ पनि सोभियत संघले निर्वासित गरेपछि नर्वेमा बस्दै आएकी थिइन् । यो किताबले सोभियत संघमा तहल्का पिट्यो ।
लेनिनको यो प्रेम कथाका बारेमा उनका सबै सहयोगीलाई थाहा थियो तर सबै मौन थिए । किताबमाथि धेरैले धेरै खालका प्रतिक्रिया दिए । त्यो समयसम्म सोभियत संघमा स्टालिनको उदय भइसकेका थियो । उनले यो किताबलाई आधार बनाएर बूढी भइसकेकी लेनिनकी पत्नी क्रुप्सकायालाई नै निशाना बनाएका थिए ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ १७, २०७७, ०७:१८:००
नेकपा विवादका माझ किन सक्रिय भइन् होउ यान्छी ?